Interview with Niroj Pandey | ‘हामीले सबैलाई बाटो देखाएको छौं’
मेचीकाली : 2015-05-26 18:35:41
-निरोज पाण्डे, अध्यक्ष
अनेरास्ववियु क्याम्पस जिल्ला कमिटी काभ्रे
एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुमा लामो समय सम्म सक्रिय रूपमा भुमिका निर्वाह गर्दै तीन बर्षदेखि काभ्रे अनेरास्ववियुको जिल्ला अध्यक्ष रहेका निरोज पाण्डे बैशाख १२ गते आएको बिनासकारी महाभुकम्प बाट ध्वस्त रहेको काभ्रेको गाउँ बस्ती र बिद्यालयमा अनबरत रूपमा सक्रिय छन् । उनीसहितको टिमले हालै मात्र काभ्रेको काशीखण्ड नगरपालिकाका मेथिन्कोट्मा अवस्थित श्री कृष्ण निमाविको अस्थायी नमुना बिद्यालय निर्माण गरेको छ । अध्यक्ष पाण्डे युवा विद्यार्थी हरु जुटे राष्ट्र पुनर्निर्माण सहजै गर्न सकिने दाबी गर्छन् । प्रस्तुत छ विद्यालय पुननिर्माणबारे उनीसँग गरिएको कुराकानी :
अनेरास्ववियु अहिले के गर्दै छ ?
अनेरास्ववियु गतिशील संगठन हो । त्यसैले अहिले अनेरास्ववियु काभ्रे महाभुकम्पबाट ग्रस्त काभ्रे जिल्ला को विभिन्न ठाउँ हरुमा पीडित हरुको लागि राहत मा जुटिरहेको छ । हामीले काभ्रे जिल्लाको क्षति ग्रस्त ठाउँ हरुमा आ आफ्नै विद्यार्थीहरुसंग रकम संकलन गरेर र विभिन्न संघ संस्थाहरु संग समन्वय गरि राहत बितरण गरिरहेका छौ । जस अन्तर्गत ज्याम्दी नाल्दुम कोसिदेखा भिमखोरी बिर्ता देउराली श्यामपाटी पाँचखाल देउपुर सिपाली नाला रबिओपी लगायत को ठाउँहरुमा खाद्यान्न लत्ताकपडा त्रिपाल औषधि जस्ता सामाग्रीहरु बितरण गरेका छौ ।
महा भुकम्प पश्चात् शैक्षिक संस्थाहरु निकै नै क्षति भएका छन शैक्षिक क्षत्रमा तपाई हरुको योगदान के छ ?
निस्चय पनि महाभुकम्प पश्चात् जिल्ला को धेरै शैक्षिक सस्थाहरु क्षती ग्रस्त भएका छन् । जस्को कारण पठन पाठन ठप्प भएको छ । यिनै समस्या हरु लाई मध्यनजर गर्दै अनेरास्ववियु काभ्रे अस्थायी विद्यालय निर्माण मा जुटि रहेको छ । हामीले भर्खर काशिखण्ड नगरपालिका वडा न ४ मेथिनकोटमा अवस्थित पुर्ण रूपमा क्षति ग्रस्त भएको श्री कृष्ण नि मा बि को अस्थायी टहरा निर्माण गरि हस्तान्तरण गरेको छौ । बिद्यार्थिहरु पढ्न बाट बन्चित नहुन भन्ने उदेश्य अनुरुप हामीले पाँच कोठाको अस्थायी टहरा निर्माण गरि नमूना बिद्यालय निर्माण गरेको छौ ।
सबै ठाउँमा बिद्यालय निर्माण गर्न सम्भब छ त ?
हामीले जिल्ला को रोशी बेल्ट मन्डन बेल्ट कोसिपारी बेल्ट डाडापारी बेल्ट तिमाल बेल्ट कुन्ता बेल्ट गरेर भेग हरु छुट्याएका छौ । सबै बिद्यालय हामीले निर्माण गर्न नसकौला तर हामीले सुरुवात गरेको यो अभियान ले हमिलाइ उर्जा थपेको छ । स्थानीय श्रोत र साधन को प्रयोग गरेर पनि बिद्यालय निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामी ले प्रमाणित गरेको छौ । जस्का कारण सबै युवा विद्यार्थी हरु आज आआफ्नो ठाउँ मा बिद्यालय निर्माण मा जुट्नु भएको छ । सबै ले आ आफ्नो ठाउँ बाट जुट्ने हो भने यो सम्भब छ ।
विद्यालय निर्माण मा जुटिरहदा तपाईं हरु लाई कुनै संघ संस्था ले समन्वय गरेको छन् ?
विभिन्न संघ संस्था हरु पनि बिद्यालय निर्माण को योजनामा रहेको कुरा हामीले सुनेको छौ । तर हाम्रो अभियान मा भने हामीले कसैको पनि सहयोग पाएका छैनौ । तर हामीले बिद्यालय निर्माण गर्दा भने स्थानीय, बिद्यालय ब्यबस्थापन शिक्षक शिक्षिका सबै को भौतिक र नैतिक समर्थन पाएका छौँ ।
प्राइभेट बिद्यालय हरु डेढ महिना देखि बन्द छन तर शुल्क वैशाखदेखि नै लिन्छन् ? तपाईंको संगठनले यो बिषय मा के गर्दै छ ?
यो जटिल समस्या बनिरहेको छ । अनेरास्ववियु केन्द्रले यस बिषयमा निजि बिद्यालयलाई शुल्क नलिन अपिल गरेको छ । हामीले पनि जिल्ला का निजि बिद्यालय लाई अपिल गरिसकेको छौ । यो संकटको समयमा निजि बिद्यालयहरुले यो बिषय मा गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नु हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौ ।
हामी बिद्यार्थिहरु कलम समाउने हातले आज औजार हरु लिएर बिद्यालय निर्माण मा जुटिरहेको छौ । हामी युवा बिद्यार्थिहरु जुटेर लाग्ने हो भने हामीले यो मुलुकको पुनः निर्माण सहजै गर्न सक्छौ तसर्थ हामी लाई हातमा हात र काँधमा काँध मिलाएर अखिलको यो अभियान मा जुट्नु हुन सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।